Geology akụkọ ihe mere eme: njirimara, mkpa na ihe ọ na-amụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Geology nke akụkọ ihe mere eme
N'ime sayensị anyị maara dịka geology nwere ngalaba ọkachamara karịa nke na-ahụ maka ịmụ na nyochaa mgbanwe niile na-eme na ụwa anyị. Nke a alaka geology mara site na aha nke geology. Ngalaba a na-achọ ịmụ gbasara mgbanwe niile na-eme na ụwa anyị a sitere na ya wepụta rue ugbu a.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara na mkpa niile nke akuku ala.
2 Geology na usoro ihe omumu
3 Geological oge na geology
Ngalaba sayensị a na-achọ ịmụ mgbanwe mgbanwe akụrụngwa nke mbara ala nwere na ụwa ebe ọ bụ na etolitere ya ihe dịka afọ gara aga 4.570 nde afọ ruo ugbu a. Dị ka anyị si mara, enyemaka ala anaghị adị mgbe oge. Ejiri efere tectonic mejupụtara ala ụwa anyị. Efere ndị a nwere ngagharị a maara dị ka Mgbagharị kọntinent na nke na-akwali site na convection ugbu a nke uwe elu ụwa.
Na mgbakwunye na ihe niile anyị kwuru, ha dị ọtụtụ ihe omumu banyere ala mpụga nke na-agbanwe ma gbanwee enyemaka dị ka anyị si mara ya. Nke a na-eme ka jioloji nke mbara ala kwụsie ike karịa afọ. Na nke ọ bụla ọ bụ geological enwere otutu ihe enyemaka nke geomorphological na ala ndi kari nke dabere na flora, fauna, ihu igwe na ihe ndi ozo di na mbara ala anyi.
Iji chọpụta oge metụtara usoro mgbanwe mbara ala nke ọ bụla, ndị ọkà mmụta mbara ala dabere na nnukwu ihe mere na ụwa anyị. N'ụzọ dị otu a enwere ike ịtụ nkume dị na usoro na-aga n'ihu nke nkeji chronostratigraphic nkeji. A ghaghi iburu n'uche na dika iji tụọ oge nke na-eme na mbara ala na ọkwa ụwa, anyị ga-agụ site na geological oge. Nke a pụtara na ala agaghị agbanwe agbanwe n'ime afọ ole na ole, ọbụnadị na ọkwa mmadụ. Mmadu na-ebikarị nkezi na ihe dịka afọ 80-100, n'oge a kwa, a naghị ahụ mgbanwe nke enyemaka ahụ.
Geology na usoro ihe omumu
Ihe omumu banyere ala bu ihe omuma nke n’eme ka nyocha nke obula banyere ihe omumu banyere ala na ihe omume ndi meworo n’ime akuku banyere mbara ala. A na-edekọ ihe omume ala ndị a na nkume. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi nweta ezigbo ebe nchekwa nke ụwa wee kwuo. Ọ bụ ozi bara uru nke na-ekpughere anyị otu ọdịdị mbara ala ụwa si malite.
Isi ọrụ ndị ọkà mmụta banyere ala na-amụ banyere akụrụngwa akụkọ ihe mere eme bụ ka ha na usoro ndị a niile dị na usoro nhazi oge. Usoro nhazi usoro ala a nwere nwayọ dịka njirimara ha. Dịka anyị kwuburu na mbụ, usoro nhazi ala a anaghị eme na ụbọchị, ọnwa, ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ. A na-enye ha site na ọtụtụ puku afọ na ọtụtụ nde afọ. Dị nwayọ a nwere ike ịhapụ mmetụta nke ike na adịgide adịgide maka anya mmadụ. ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na enwere usoro nhazi ala nke na-eme na mberede. Otu ihe atụ bụ nke mgbawa ugwu, nnukwu mmiri, ala ọma jijiji, na ihe ndị ọzọ.
Usoro nhazi ala a nwere ọsọ nke enwere ike ịghọta na oge mmadụ. Na mgbakwunye, ha bụ usoro nwere ike ịgbanwe mpaghara nke enyemaka na ụzọ nhazi ogologo oge. N’oge gara aga, echere na mbara ụwa anyị etolite n’ime ụbọchị 6 ma nwekwa afọ na-agaghị agafe afọ 6000. Nke a nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na okpukperechi Katọlik ma agọnarị ya site na ozi enwetara site na usoro sayensị.
Otu echiche banyere nguzobe nke ụwa anyị bụ na usoro mberede bụ naanị ihe nwere ike ime ka enyemaka nke ụwa dị ogologo oge. Otú ọ dị, sayensị egosiwo nke ahụ ndị na-ahụ maka ihe ndị dị na mbara igwe dịka ifufe, ọdịda, ihu igwe, wdg. Ha bụ ndị megharịrị ụwa ihu ruo mgbe ha ruru nhazi anyị nwere ugbu a. Anyị makwaara na ọ ga-aga n'ihu na-agbanwe enyemaka ahụ n'ụzọ na-aga n'ihu na nke a na-apụghị ịghọta aghọta maka mmadụ.
Geological oge na geology
Maka nke a, anyị ekwuola na mmadụ anaghị ahụta mgbanwe nke enyemaka ụwa, anyị ga na-arụtụ aka oge niile. Nke ahụ bụ, otu narị afọ bụ obere oge iji nwee ike ịhụ ọdịiche pụtara ìhè na mgbanwe nke enyemaka ala. Inwe ike ihu mgbanwe dị ịrịba ama dịka Osimiri ma ọ bụ na ịlaghachi n'ugwu a, anyị ga-eche ihe dịka narị afọ iri abụọ. Mgbanwe ọzọ nwere ike ime na enyemaka bụ mmegharị nke asụsụ glacier ma ọ bụ nguzobe nke ọdọ mmiri mpụga.
Maka ihe niile a anyị kwuru na mbụ, enwere nsogbu ka ukwuu na ọmụmụ sayensị nke akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na a ga-eji akpịrịkpa ohere na oge mee ihe site na ịdị ukwuu nke sitere na obere ụkpụrụ gaa ụkpụrụ n'ụdị nnukwu ibu . Enwere ike ikwu na nkeji nke geology dị otu nde afọ. Nke a bụ oge zuru oke maka mgbanwe ndị dị mkpa a ga-ahụ, dị ka ihe nwere ike ịbụ na osimiri na-emikpu ndagwurugwu ya, ụsọ oké osimiri nwere ike ịkwanye ọnụ ugwu ma ọ bụ ugwu bibie elu ugwu.
E nwere ike ikpebi iji ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ndị ọkà mmụta mbara ala ji ya na-atụnyere awa 24 nke ụbọchị nwere ndị ga-erugharị otu awa ma ọ bụ ihe na-erughị ya ga-eru ihe dịka narị afọ abụọ. Anyị na-atụnyere oge usoro ala nke mejupụtara n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị ma enwere ike ịsị na Preonambrian eon ga-adaba ma ọ dịkarịa ala awa 9 na archaic 12 awa. Ihe ndị ọzọ a maara dịka oge mbụ bụ nke ga-amalite mgbe elekere itoolu nke ụtụtụ gachara na oge nke abụọ na 21: 22.48 elekere. Oge quaternary ahụ, nke bụ ebe ọdịdị mmadụ mbụ malitere, na-adịgide naanị ihe dị ka sekọnd 37.
Ihe a niile na-agbagha anyị mgbe anyị hụrụ na afọ 2.000 nke akụkọ ihe mere eme mmadụ kachasị ga-adịgide naanị otu ụzọ n'ụzọ iri, na-eme ka o doo anya na maka afọ nke ụwa anyị na oge nke usoro ihe omimi, afọ 2.000 dị obere nke oge.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkọ banyere ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Geology nke akụkọ ihe mere eme